Semalt तपाइँको व्यवसाय को सुपरचार्ज गर्न को लागी ट्विटर तरिकाहरु प्रकट गर्दछ
क्रिसमस र ब्ल्याक फ्राइडेले फेसबुक र ट्विटरमा टुम्लर र इन्स्टाग्राममा कला प्रेमीहरूलाई स .्लग्न गराउन, त्यहाँ एक व्यवसायिकको रूपमा अनलाइन सफलता पाउनको लागि विभिन्न रणनीति र विधिहरू छन्। यदि तपाईंले फेसबुक प्रयोग गर्नुभएको छ र ट्विटर प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ भने, हामी यहाँ केहि चाखलाग्दो सुझावहरू साझा गर्न को लागी शुरू गरीरहेका छौं।
पहिलो चीज तपाईले गर्न चाहानुहुन्छ प्रोफेशल देखिने ट्विटर प्रोफाइल बनाउनु र तपाईको बायो पूरा गर्नु। सामाजिक मिडिया प्रशंसकहरू प्राप्त गर्न सजिलो छैन, त्यसैले तपाईंले वास्तवमै कडा परिश्रम गर्नुपर्नेछ। यो भनिन्छ कि तपाईले चीजहरू राम्रोसँग बनाउनु पर्छ खास गरी जब तपाईं ट्विटरमा नयाँ हुनुहुन्छ र यसका बारे सबै कुरा जान्नुहुन्न। सुरुमा, यसले तपाईंलाई अधिक समय र बढि व्यक्तिहरूलाई संलग्न हुन केहि समय लिन सक्दछ।
Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक फ्रान्क Abagnale भन्छन् कि ट्विटर को उपयोग इंस्टाग्राम र फेसबुक को उपयोग भन्दा धेरै राम्रो र सजिलो छ। तपाईंले भर्खरै मानिसलाई तपाईंको अनुसरण गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ, र यो गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं राम्रोसँग योजना बनाउनुहुन्छ र मानिसहरूलाई गुणस्तरीय सामग्री र उत्कृष्ट सामग्री साझा गरेर संलग्न गर्नुहुन्छ।
ट्विटरको एल्गोरिथ्मको साथ काम गर्नुहोस्
धेरै व्यक्तिहरू ट्विटर एल्गोरिथ्मको महत्त्व जान्दैनन् र जान्दैनन् कि योसँग काम गर्दा उनीहरूका अनुयायीहरूको संख्या बढ्न सक्छ। डिजिटल मार्केटरहरू र सोशल मिडिया प्रबन्धकहरू जान्दछन् कि ट्विटरको एल्गोरिथ्मसँग काम गर्ने ब्राण्डहरू र वेबसाइट मालिकहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले यसमा नजर राख्नुपर्दछ र कस्तो प्रकारको उतार चढावहरू चल्दै छन् भनेर जान्नुपर्दछ।
ट्विटर भिडियोहरू प्रयोग गर्नुहोस्
ट्विटर भिडियोहरू प्रयोग गर्नाले तपाईंलाई धेरै अनुयायीहरू, सेयरहरू दिन र मनपर्दैन। सोशल मिडिया भिडियो मार्केटिंग तपाईंको व्यवसायलाई विस्तार गर्ने एक उत्तम तरिका हो, र यो धेरै लेखहरूमा हाइलाइट गरिएको छ। ट्विटर बाहेक, तपाईं स्न्यापचेट, युट्यूब, र इन्स्टाग्राम भिडियोहरूको लागि अप्ट इन गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको अनुयायीहरूको संख्या बढाउन। तपाइँको सामाजिक मिडिया प्रोफाइल को समग्र रूप काफी प्रभावशाली र आकर्षक हुनु पर्छ।
अधिक बारम्बार ट्वीट गर्नुहोस्
तपाईं प्रति दिन कतिवटा ट्वीटहरू साझा गर्नुहुन्छ? ठिकै छ, विचार यो हो कि तपाईंले प्रत्येक दिन ट्विटर प्रयोग गर्नुपर्नेछ र आफ्ना अनुयायीहरूलाई एक मार्ग वा अन्य तरिकामा व्यस्त राख्नु पर्छ। प्रत्येक दस मिनेटमा ट्वीट पठाउनुहोस् संसारले यो जान्न दिनेछ कि तपाईं अनलाइन हुनुहुन्छ र तपाईंको फ्यानहरूलाई प्रभाव पार्न तयार हुनुहुन्छ। यसले अन्ततः तपाईंको फलोअरहरूको संख्या बढाउछ, र तपाईंको प्रयोगकर्ताहरू तपाईंको ट्वीट्समा बढी मग्न हुनेछन्।
केही फरक र नयाँ प्रयास गर्नुहोस्
यो आवश्यक छ कि तपाईंले अरू भन्दा पहिले के गरिरहनु भएको भन्दा केहि फरक, नयाँ र बढी आकर्षक लाग्ने प्रयास गर्नुहोस्। ती दिनहरू गयो जब मानिसहरूले उस्तै कुरा फेरि र फेरि साझा गर्थे। आजका दिनहरूमा व्यक्ति प्रोफाइल प्रोफाईलमा आकर्षित हुन्छन् जसले आकर्षक प्रोफाइल तस्बिरहरू र अद्भुत सामग्री राखेका छन्। यसैले तपाईंले ट्विटरमा धेरै अनुयायीहरू प्राप्त गर्न विभिन्न चीजहरू र अद्भुत सामग्रीको साथ प्रयोग गर्नु पर्छ। यो प्रक्रिया जटिल लाग्न सक्छ, तर यो इन्टरनेट मा तपाईंको अस्तित्व सुनिश्चित गर्न एक मात्र तरीका हो। त्यसोभए यदि तपाईं दृश्यता अनलाइन प्राप्त गर्न गम्भीर हुनुहुन्छ भने, तपाईंले उत्कृष्ट र अनुपम ट्वीटका साथ लेखहरूमा मानिस संलग्न गराउनु पर्छ। त्यसो भए यसको बारेमा तपाईको राय के हो? तल टिप्पणी बक्समा विचारहरू साझा गर्न नबिर्सनुहोस्।